ONS Bisesh :: Outline News Service
नायक अर्जुन शिखरमा, नायिका निशा उक्लिँदै आचार्य प्रमोद/ काठमाडौं, जेठ ६ (ओएनएस) : विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने रुची पछिल्लो समय बढेर गएको देखिन्छ । स्वदेशी देखि विदेशीसम्म निक्कै ख्याती कमाएको सगरमाथामा सोमबार नेपाल र भारतका संयुक्त सेनाहले सफल आरोहण गरे । सगरमाथा सरसफाईको लागि गएको टोली मध्येको दोस्रो समूहले आज सफल आरोहण गरेको हो । .. Posted On: May 20 2013, 2:52 pm
चन्दा माग्नेको लर्को सानुभाई, काठमाडौं, ४ जेठ (ओएनएस) : बन्द भएको १२ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको साझा यातायात अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । जम्मा २ रुटमा १६ वटा बसबाट पुनः सञ्चालनमा आएको साझा बसले सुरुवातमैं रुटको विषयमा विवाद खेप्नु पर्‍यो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफूहरुलाई नसोधि रुट दिएको भन्दै साझा विरु.. Posted On: May 18 2013, 5:28 pm
सिक्किम एक नजर ! काठमाडौं, ४ जेठ (ओएनएस) : प्रकृति भनेपछि हुरुक्क नहुने विरलै होलान् यो संसारमा । त्यस्तै मनमोहक र सुन्दर वातावरण भएको एउटा ठाउँ हो सिक्किम । पहिले स्वतन्त्र मुलुक तर अहिले भारतको एउटा ठाउँको रुपमा रहेको सिक्किमको हावापानी, संरचना, भूतल निक्कै सुन्दर छ । पहाडी इलाका भएपनि त्यहाँको विकासले साँच्चै अचम्मित पार्छ । Posted On: May 18 2013, 1:25 pm
चेपुवामा खिलराज !
'पद भयो निल्नु न ओकल्नु' प्रमोद/राजु काठमाडौं, ३ जेठ (ओएनएस) : आफुले सोचे जस्तो हुँदैन भनेर दलहरुले सरकारको नेतृत्व गर भन्ने बेलादेखि नै खिलराज रेग्मीले अनकनाइरहेका थिए । यद्यपि स्वदेशी र विदेशी दवावपछि उनी पछि नेतृत्व सम्हाल्न राजी भए । रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नहुँदै देखिको शंका अहिले वास्तविकता.. Posted On: May 17 2013, 7:20 pm
सकसमा मदन भण्डारी नहुँदाका २० वर्ष
भारतको चाहना पुरा गर्दा पनि भएन भरतमोहन अधिकारी / मदन भण्डारी हाम्रो बीचमा नहुनु भएको यो २० वर्ष भयो । यो बीचको नेपाली राजनीतिलाई नियाल्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने मदनको रहस्यमय मृत्युसँगै नेपालको राजनीतिको दुर्भाग्य सुरु भएको रहेछ । नेकपा एमाले अहिले पनि मदनले स.. Posted On: May 17 2013, 9:37 am
किन हेप्छ काठमाडौंले ?
'आफ्नै परिचयमाथि शंका' भूवन क्षेत्री / काठमाडौं, १ जेठ (ओएनएस) : आफ्नो देशको राजधानी पनि कसैका लागि परदेश हुनसक्छ र ? अथवा आफ्नैले परदेशीको व्यवहार गर्न सक्छन् ? तर केही नेपाली यस्ता छन् जो आफ्नो ठाउँ छाडेर राजधानी छिर्दा आफु विदेशीएको अनुभव गर्छन्, दुरीका हिसावले टाढा भएर होइन । व्यवहार टाढाको भएपछि ज.. Posted On: May 15 2013, 5:58 pm
के के गर्यो रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ? (कामको सूचीसहित)
काठमाडौं, ३१ वैशाख (ओएनएस) : प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गठन भएयता गरेका कार्यहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख महिनामा गरेका कामहरुको १४ बुँदे सूची सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा सडक बिस्तार, नागरिकता टोली.. Posted On: May 14 2013, 7:19 pm